अ’नुहारमा यस्ता सं’केत देखिए ? सा’वधान ! हु’नसक्छ यी १० रो’गको संके’त - Nawalpur Dainik
अ’नुहारमा यस्ता सं’केत देखिए ? सा’वधान ! हु’नसक्छ यी १० रो’गको संके’त
हरेक रो’गको कुनै न कुनै सं’केत हुन्छ । यसैगरी केही स्वा’स्थ्य स’मस्या छन्, जुन अ’नुहारबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यसमध्ये कुनै निक्कै गम्भिर स’मस्या पर्छन्, जसलाई देखाउँन तत्कालै चि’कित्सक कहाँ जानुपर्ने हुन्छ ।
१) अ’नुहार सुन्निनुः यदि पुरै अ’नुहार सुन्निने हुन्छ भने यो मृ’गौला सम्बन्धि रो’गको संकेत हुनसक्छ। यद्यपी, यस्तो स’मस्या औषधिको ‘साइड-इफेक्ट’का कारण पनि हुनसक्छ । २) दारीको रौँ झर्नुः दारीको रौँ झर्ने भएमा ‘हाइपोथायराइडिज्म’ नामक रो’गको संकत हुनसक्छ । ३) अनुहारमा रौँः महिलाको ओठको माथि र चिउँडोमा अस्वभाविक रुपले रौँ आउँनु थाइराइड वा हर्मोनल असन्तुलनको संकते पनि हुनसक्छ । ४) अनुहार पहेलिनुः लामो समयसम्म अनुहारमा पहेलोपना रहनु क’लेजो रो’गको संकेत हो । साथै यो पहेलोपन पोलिया र एनिमिया अर्थात् र’क्तस्रावको संकेत पनि हुनसक्छ । ५) सेतो दागः अनुहारमा सेतो दाग हुनु क्याल्सियमको कमीको संकेत हुनसक्छ । साथै यो आयरनको कमी वा पेटमा जुका रहेको संकेत पनि हुन सक्छ ।
६) चम्किलो सेतो दागः अनुहारमा केही स्पष्ट देखिने सेतो दाग हुनु कुष्ठ रो’गको संकेत हुनसक्छ । यो स’मस्या केही गम्भिर हुन्छ । ७) पानी फोकाः अनुहारमा पानी फोका आउँनु ‘चिकनपक्स’(ठेउला) को संकेत हो । ८) डन्डिफोर आउनुः अनुहारमा लामो समयसम्म डन्डिफोर आइरहने स’मस्या हुनु हर्मोनको असन्तुलनको संकेत हो । त्यस्तै पेट सम्बन्धि स’मस्या पनि हुनसक्छ । ९) सुन्निनुः लगातार केही दिनसम्म पुरै अनुहार सुन्निनु एन्जियोएडिमाको संकेत हुनसक्छ । १०) अनुहारमा हल्का दागः यदि अनुहारमा हल्का सेतो दाग देखिएमा यो पे’टमा जुका रहेको संकेत हो ।
Prevअ’नुहार गोरो र च’म्किलो बनाउन चाहनुहु’न्छ ? यी १५ मध्ये कुनै एक उ’पाय फलो गर्नुहो’स्
Nextमाघ ३० गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल